South African Airways iyo Emirates ayaa iska kaashanaya duulimaadyada Koonfur Afrika-Dubai
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » South African Airways iyo Emirates ayaa iska kaashanaya duulimaadyada Koonfur Afrika-Dubai
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Wararka Koofur Afrika • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka Imaaraadka Carabta
South African Airways iyo Emirates waxay iskaashi la leeyihiin duulimaadyada Koonfur Afrika ilaa Dubai
Emirates waxay si dhow ula shaqaynaysay SAA si ay dib ugu hawlgeliso iskaashigeedii soo jireenka ahaa kaas oo ujeedadiisu tahay hagaajinta waayo-aragnimada macmiilka iyo siinta qiimo badan safrayaasha marka ay ku duulayaan labada wadayaal.
Emirates iyo South African Airways waxay ka shaqeynayeen sidii loo kordhin lahaa isku xirnaanta badeecadaha iyo adeegyada.
Heshiiska waxaa ka mid ah SAA codeed iyo Emirates-ka ay ku shaqeeyaan waddooyinka u dhexeeya Koonfur Afrika iyo Dubai oo hal tikidh ah.
Emirates ayaa sidoo kale xeerka SAA ku dhejin doonta jidadka waaweyn ee u dhexeeya Koonfur Afrika iyo Dubai.
Iyada oo South African Airways (SAA) ay dib u bilaabanayso hawlaheedii, Emirates waxay si dhow ula shaqaynaysay SAA si ay dib ugu hawlgeliso iskaashigeedii muddada dheer kaas oo ujeedadiisu tahay hagaajinta waayo-aragnimada macmiilka iyo siinta qiimo badan safrayaasha marka ay ku duulayaan labada wadayaal. Tallaabadan ayaa sidoo kale gacan ka geysaneysa sidii loo adkeyn lahaa istaagga iyo meeqaamka SAA waxayna dhisi doontaa dardar koritaan ah maadaama markabku uu dib u bilaabayo duulimaadyadii lix meelood oo Afrikaan ah.
Emirates iyo imanaysa waxay ka shaqeyneysay sidii loo kordhin lahaa isku xirnaanta badeecadaha, adeegyada iyo dib -u -kicinta is -dhexgalka u dhexeeya barnaamijyada daacadnimada, waxayna marka hore la bilaabi doontaa qorshe ganacsi oo is -dhaafsi ah. Heshiiska waxaa ka mid ah koodhkii SAA-ga iyo kuwa ay maamusho Emirates-ka ee u dhexeeya Koonfur Afrika iyo Dubai oo ku socda hal tikidh, taasoo u saamaxaysa dadka safarka ah inay si aan kala go ’lahayn u hubiyaan boorsooyinkooda meelaha ugu dambeeya laga bilaabo Oktoobar 1. Afrika iyo Dubai.
Adnan Kazim, Madaxa Sarkaalka Ganacsiga, Shirkadda Diyaaradda Emirates, ayaa lagu xusay soo noolaynta iskaashiga: “Iskaashiga u dhexeeya Emirates iyo South African Airways wuxuu ku dhisanyahay ballanqaadkeenna wadaagga ah ee ah inaan siino macaamiisha xulashooyin jadwal badan iyo isku xirnaanta kordhaysa Afrika oo dhan iyo shabakadeena sii kordheysa. Waxaan qiimeyneynaa ku dhawaad ​​25 sano oo iskaashi guul leh aan la leenahay SAA waxaanan si aad ah uga shaqeyneynaa inaan qaadno tillaabooyin wax ku ool ah oo horay loo qaaday si aan u sii wadno kobcinta xiriirkeenna oo aan siinno macaamiisheenna xitaa isku xirnaan dheeri ah mustaqbalka. ”
Maamulaha Ku-meelgaarka ah ee SAA Thomas Kgokolo ayaa leh, “Markay SAA bilawdo dib-u-dhiska, wada-shaqaynta muddada dheer la lahayd Emirates labadaba waa la qiimeeyaa waxayna muhiim u tahay qorshayaasheena kobcinta mustaqbalka. Waxaan wadaagnaa aragti isku mid ah oo aan kala go 'lahayn, hufan, iyo adeeg macmiil oo aad u fiican oo leh isku xirnaanta meelo badan. Waxaan ku kalsoonahay in iskaashigan uu horseedi doono in lagu daro dariiqyo badan iyo ikhtiyaarro loo aado, gaar ahaan Afrika oo dhan maadaama aan labadeenuba aqoonsannahay awoodda dhaqaale, ganacsi iyo dalxiis ee qaaraddu leedahay iyo kaalinteenna muhiimka ah ee awood -siiyaasha. ”
Bilaha soo socda, waxaa socda qorshayaal lagu ballaarinayo iskaashiga laguna sii xoojinayo iskaashiga xitaa qodobo badan oo gudaha iyo gobolka Afrika ah sida South African Airways waxay ballaarineysaa howlaheeda, halka Emirates ay sidoo kale si isdaba joog ah ugu dari doonto xulashooyin dheeri ah macaamiisha SAA si ay ugu xirmaan meelaha la doorto ee ku jira shabakadeeda hal safar.
Iskaashiga Emirates SAA wuxuu bilaabmay 1997 -kii, tobankii sano ee la soo dhaafay in ka badan hal milyan oo rakaab ah ayaa ku duulay shabakadda wadajirka ah ee labada shirkadood, oo gaadhay 110 goobood ka hor masiibada.
Dib -u -soo -nooleynta iskaashiga SAA, raad -raaca Emirates ee Koonfurta iyo Koonfurta Afrika wuxuu siiyaa macaamiisha fursado badan qaaradda.